Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Cab Khamri Badan. Caawinta Kobcinta Dhaqaalaha Adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Khamriga & Ruuxa
Cab khamri badan
Sannadku wuxuu ahaa 2020, aniga iyo kuwa kaleba, waxaan ku kharash gareeyay US $ 326.6 bilyan khamri. Waad ku mahadsan tahay masiibada, annaga khamri-cabbayaasha waxaan helnaa nasasho annagoo cabbitaanno khamri badan, u riixay dakhliga illaa $ 434.6 bilyan marka la gaaro 2027, taasoo ka dhigan koror boqolkiiba 4.3 ah inta u dhaxaysa 2020-2027.
Mareykanka wuxuu matalaa suuq khamri oo lagu qiyaasay US $ 88 bilyan (2020) halka Shiinaha (oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida) la saadaalinayo inuu gaaro $ 93.5 bilyan marka la gaaro 2027.
Japan iyo Kanada ayaa la saadaalinayaa inay ku koraan 1.3 boqolkiiba iyo 3.1 boqolkiiba siday u kala horreeyaan inta u dhaxaysa 2020-2027.
Jarmalka waxay u badan tahay inay koraan ku dhawaad ​​2.2 boqolkiiba inta lagu jiro waqtigan.
Khamriga macmacaanka (tusaale ahaan, Sauternes/France; Tokaji Aszú/Hungary; Muscat/Italy) waa qayb ku sii kordhaysa USA, Canada, Japan, China iyo Europe waxaana la filayaa inay koraan boqolkiiba 2.8. Suuqyadan gobolku waxay matalaan cabbir suuqeed oo ah US $ 43 bilyan (2020) waxayna u badan tahay inay koraan ilaa US $ 53 bilyan dhamaadka 2027 (businesswire.com).
In kasta oo qaar ka mid ah khamriga lagu qasbay in la xidho masiibada awgeed, qiyaastii saddex meelood meel ayaa u suurtagashay in ay haystaan ​​iib ka wanaagsan kii sannadkii hore. Soo -saareyaashii waaweynaa ayaa isu soo baxay oo hagaajiyay xirfaddooda si ay khamri u geliyaan dhalooyinka, khaanadaha, iyo gacmaha macaamiisha.
Casharada la bartay
Caqabadaha iibinta iyo qaybinta ayaa aad u badnaa: Soosaarayaasha qaaliga ah iyo kuwa qaaliga ah ma sii haysan maqaayadaha iyo albaabada cuntada hoteelka, qolalka dhadhaminta waa la xiray, soo -saareyaasha waaweyna wax -soo -saarkoodu waa ku yaraa si loogu weeciyo raashinka iyo farmasiiyada. Xeebta galbeed waxay la kulantay dab ka billowday Kaalifoorniya kuna faafay Koonfurta Oregon oo baabi'isay boqolaal kun oo tan oo canab ah oo ku yaal gobolladaas.
Warka xun waxaa isku dheelitiray war wanaagsan iyadoo celceliska khamriga qoyska ee duubista iibka intarneedka uu kordhay wax ka yar 1 boqolkiiba iibka ilaa in ka badan 10 boqolkiiba wadarta iibka. Beeralayda leh xiriir macmiil oo wanaagsan ayaa helaya wicitaanno badeecad iyo iibinta taleefanka waxay noqdeen il muhiim ah oo dakhli ku dhow habeen iyadoo iibinta fiidiyowga dhijitaalka ah lagu beddelay waayo-aragnimo badan oo shaqsiyeed.
Arrimaha socda ee warshadaha oo dhan ma baabi'in. Dhaqdhaqaaqa ka hortagga khamriga wuu sii socday, macaamiisha caafimaadka maskaxda u leh sii waday inuu fadhiisto dhinacyada, maqnaanshaha maalgashiga iibka dhijitaalka ah ayaa sii waday inuu u baahdo fiiro gaar ah. Waxa kale oo jira welwel laga qabo qiimaha sare u kaca ee qalabka qalalan, yaraanta sahayda guud ahaan, sicirka iyo waqtiga keenista oo kordha dhalooyinka dhalooyinka, sanduuqyada alwaaxda, sanduuqyada iyo sariirtaha.
Alaab -qeybiyeyaasha qaar ayaa macaamiisha weydiisanaya inay ka beddelaan alwaax una beddelaan kartoon; si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cadaadis saaran warqadda iyo kartoonnada marka ay timaado waqtiyada kama dambaysta ah iyo qiimeynta. Xaaladaha qaarkood, alaabta ceeriin ayaa kordhay boqolkiiba 50. Soo -saareyaasha dhalooyinka ayaa hoos u dhigay xawaaraha wax -soo -saarka sannadka 2020, mana filayaan soo kabasho xoog leh mar dhow. Iyada oo boomeriyayaashu ay ka fariisanayaan tiro aad u badan Covid, baahida loo qabo in la qoro ragga iyo dumarka da'da yar si ay u noqdaan macaamiisha khamriga ayaa noqotay mid muhiim ah.
Daawashada Kubadda Crystal
Waxaa jira mustaqbal ifaya oo loogu talagalay warshadaha khamriga, si kastaba ha ahaatee, waa in wax laga qabtaa xaqiiqooyinka suuqa suuqgeynta. Laga bilaabo 2020 iyo horay u socoshada, dad badan ayaa ka shaqeyn doona guriga, macaamiisha ayaa u guuri doona xaafadaha iyo isbeddellada sii kordhaya waxay ka dhigan yihiin in iibsiyada onlaynka ah ay macaamiisha ka kaxayn doonaan kanaalada kale ee jira. Iibinta makhaayadda ayaa soo noqon doonta iyada oo xannibaadaha ay sii yaraanayaan iyadoo dadka maxalliga ah ay taageerayaan cunnada; si kastaba ha ahaatee, sugitaanka soo laabashada dalxiisayaasha waxay qaadan doontaa dulqaad. Makhaayadaha waxay u badan tahay inay dib-u-habayn ku sameeyaan adeegga, iyagoo ka guuraya habka fadhiga ee adeegga buuxa una guuraya xeelado dakhli cusub dhaliya gaar ahaan keenista guriga iyo moodooyinka u-socda; si kastaba ha ahaatee, qaababkani ma dhiirigelinayaan iibinta aalkolada taasoo keentay in maqaayado badan ay yareeyaan alaabada khamriga iyo hagaajinta bixinta.
Makhaayadaha yar yar ee madaxbannaan ayaa ugu daran oo waxay noqdeen barta ugu horreysa ee lagu iibiyo khamriga ay soo saaraan khamriga qoysaska yaryar. Makhaayadaha guulaystay waxay ahaayeen baabuur-wadid, soo-qaadid dhinac-dhinac ah iyo / ama dalab ku salaysan app-ka iyo gaarsiinta guriga (ie, pizzerias, delis, baabuurta cuntada, cuntada degdega ah iyo dukaamada qaxwada). Heerarka xiritaanka makhaayadda ugu weyn waxay ku sugnaayeen gobollo leh kirooyin magaalo oo aad u sarreeya (California, Nevada, Hawaii) iyo sida Yelp sheegtay, boqolkiiba 61 xidhitaanka maqaayaddu waxay noqon doonaan kuwo joogto ah; si kastaba ha ahaatee, raasumaal cusub ayaa laga yaabaa inay ka timaaddo ganacsato bilaabi doona bilow-ba, muddo ka badan 4-5 sano, ayaa si tartiib tartiib ah u beddeli doona qaar badan oo ka mid ah guryaha sida joogtada ah u xiran.
Waxaa jira rajo ah in dawladaha magaaladu ay sii wadi doonaan inay u oggolaadaan xiritaanka/fidinta waddooyinka cuntada dibadda ah in kasta oo cilmibaarista Mintel ay xustay (Sebtember 2020) in ku dhawaad ​​60 boqolkiiba dadka wax cunaa ay ahaayeen kuwo aan raaxo ku cunayn dibadda. Si loo dhiiri geliyo cuntada gudaha, makhaayaduhu waxay ku bixiyeen lacag aad u badan si ay u rakibaan nidaamyada nadiifinta hawada. Haddii nidaamyada sifeynta horumarsan ay ku dhiirri-gelinayaan cunnada in uu ku soo laabto waayo-aragnimada cunnada dhabanka-jowl weli lama go'aamin. Waqtigan xaadirka ah, warshaduhu waxay diiradda saarayaan cunnooyinka la aado, adeegga socod-socodka, iyo qaadista dhinaceeda.
Socotada ganacsigu waxay xarun weyn u yihiin hudheelada, shirkadaha diyaaradaha iyo maqaayadaha magaalooyinka waawayn iyo iibinta khamriga ee qaybahan lagama yaabo inay koraan suuqan la'aan. Muddada soo -kabashada ee 2+ sano ee la saadaaliyay, safarada ganacsi waxay u badan tahay inay ka gaabin doonaan oo ka yaryihiin dhacdooyinka ganacsiga warshadaha waaweyn ee soo socda.
Sida laga soo xigtay Nielsen, waxay ku kacaysaa $ 1.02 $ 12 wiqiyadood oo biir ah oo laga bixiyo goobta, $ 0.88 oo ah 1.45-ounce oo ah adeegidda ruuxa iyo $ 1.51 oo lagu shubo 5-wiqiyadood oo khamri ah. Tani waxay ka dhigan tahay in khamrigu boqolkiiba 72 ka qaalisan yahay in lagu adeego wuxuuna sharaxayaa sababta qiimaha hoose ee adeeg kasta uu qayb cad uga yahay sheekada guusha ee jinniyo. Iyada oo ay yar tahay iyo/ama ka yar tahay cuntada wanaagsan iyo ikhtiyaarrada baarka mashquulka ah, iyo kordhinta qaadashada, waxay u badan tahay in liisaska cabbitaanka khamriga sidoo kale la dhimi doono lana fududeyn doono.
Heerka koritaanka ee dhalooyinka 750-milliliter ayaa hoos u dhacay oo ay weheliyaan cabbirka baakadaha yar yar oo ay ku jiraan 375-milliliter dhalooyinka, Baakadaha Tetra, gasacadaha iyo dhalooyinka 500-milliliter. Cabbirrada yar-yar ayaa ku sii kordhayay caan-ka-pre-covid-ka waxaana laga yaabaa inay hore u qaadaan aqbalaadda.
Haddii dhalada 750-mililiter aysan caan ahayn muddo dheer-maxaa soo kordhaya? Qaababka waaweyn-wax kasta oo ka sarreeya qaybta 1.5-litir gaar ahaan kooxda 2-aad ama 3-litir oo qabta boorsada qaaliga ah oo leh koror ah 50+ boqolkiiba.
Ciyaarta qiimaha waxay diiradda saareysaa dhimista kharashaadka baakadaha. Markay boomeriyayaashu hawlgab noqdaan, waxay ku biiri doonaan millennials -ka macaamiisha macaamilka ah oo beddeli doona isticmaalka iyo kharashaadka; si kastaba ha ahaatee, way adag tahay in la cabo khamri wanaagsan oo aad u beddesho khibrad tayo yar ... Macaamiisha da'da yar ee dhaqaalahoodu wanaagsan yahay waxay u arki karaan in sanduuqa qaaliga ah ee 3-litir uu yahay iibsi wanaagsan iyo in qoyska dhallinta ah ee guriga jooga qadada iyo cashada, sanduuqa lacagta qaaliga ahi wuxuu noqon karaa jawaab sax ah.
Chardonnay wuxuu sii ahaanayaa kala duwanaanshaha ugu caansan; si kastaba ha ahaatee, heerka koritaankeedu wuxuu sii ahaanayaa hoos u dhac 2.7; merlot wuxuu muujinayaa hoos u dhaca ugu xun - ku dhawaad ​​10 boqolkiiba. Ubaxyada ayaa kabaxsan koritaanka iyadoo leh koboc waxyar ka hooseeya eber.
Isku -darka cas ayaa dib u soo noqday 2020 kadib hoos u dhac ku yimid 2019 wuxuuna muujiyey koror boqolkiiba 3.9 ah. Macmacaan, khamriyo khaas ah ayaa muujinaya koboc cajiib leh gaar ahaan khamriyo ku salaysan agave (khamriyo laga sameeyay agave buluug qallafsan; oo lagu xoojiyay isku-darka blanco tequila) oo khalkhaliya qaybaha khamriga/ruuxa oo ka baxa caannimada tequila iyo margaritas oo muujinaya koritaanka boqolkiiba 100. Khamriga Agave wuxuu ka hooseeyaa aalkolada marka loo eego tequila wuxuuna u ciyaaraa macaamil caafimaad qaba oo raadinaya kalooriyo yar. Badeecadu waxay kaloo soo jiidataa macaamiisha Hispanic -ka ah ee caadeystay badeecadda lagu iibiyay Mexico. Ku sii socoshada caanku waa prosecco, sangria iyo sauvignon blanc.
Boomers -ka carruurta (boqolkiiba 70 dakhliga la tuuro iyo 50+ boqolkiiba hantida Mareykanka) waxay sii ahaadaan kuwa ugu badan ee isticmaala khamriga. Waqtigan xaadirka ah hal dhibic oo keliya ayaa ka soocma isticmaalkooda Gen X (wuxuu dhashay horraantii-badhtamihii 1960-yadii ilaa dabayaaqadii 1970-yadii ilaa horraantii 1980-meeyadii) sidaa darteed looma tixgelin karo inay yihiin kooxda awoodda badan. Millennials (dhashay intii u dhaxeysay 1981 iyo 1996) ayaa ah fursadda kobaca ugu weyn ee warshadaha khamriga ee Mareykanka oo hadda bilaabay inay muujiyaan xiisaha qaybta khamriga. Kani waa kooxda u baahan inay ku farxaan khamriga si warshaduhu u arkaan heerar koritaan oo kasta oo la soo maray muddadii 20ka sano ahayd laga soo bilaabo 1994 ilaa 2014.
Millenniyadu kuma firfircoon yihiin qaybta khamriga qaaliga ah inkasta oo ay ku firfircoon yihiin iibsashada alaabada raaxada; qiyaastii boqolkiiba 20 kooxdani waxay cabaan khamri inkasta oo boqolkiiba 33 ay iibsadaan alaabo qaali ah. Cilmi -baaristu waxay soo jeedinaysaa in millenniyadu ay ka gaabiyeen inay ku boodaan saaxadda iibsiga khamriga sababta oo ah doorbididda hore ee biirka farsamada iyo jinniyada, su'aalaha ku saabsan arrimaha caafimaadka ee la xiriira cabbitaanka khamriga iyo dib -u -dhaca aasaaska xirfadaha, qoysaska iyo maalka marka la barbar dhigo jiilalkii hore.
Warshadaha khamrigu waa inay ogaadaan in macaamiisha da'da yar ay wax badan ka rabaan noocyada ay taageeraan. In kasta oo kuwa raadinaya maqaam-doonka ay u baahan yihiin inay muujiyaan maalkooda iyo guushooda, millenniyaduhu waxay doorbidaan in lagu wargeliyo carrada, taariikhaha goosashada, pH, kuwa khamriga sameeya iyo dhibcaha khamriga-si ay ugu dhawaaqaan aqoon saaxiibbada iyo asxaabta dhexdooda iyadoon loo tixgelin “show” off. ”
Wineries -ka xiiseynaya qabashada qeybta suuqa dhalinyarada waa inay diiradda saaraan dhaqdhaqaaqyadooda suuqgeynta arrimaha sida caddaaladda bulshada, sinnaanta iyo kala -duwanaanshaha, biyaha dib -u -warshadaynta, ka -fogaanshaha adeegsiga glyphosate, helitaanka Shahaadada LEED, iyadoo la adeegsanayo hababka beeraha iyo noolaha. Waqtigaan, ku dhawaad ​​midkoodna ma muuqdo iibka, xiriirka dadweynaha ama ololaha suuqgeynta ama bogagga internetka ee khamriga.
Ka Badan Argagixiso
Tobanka sano ee soo socda, warshadaha khamrigu waxay ku biiri doonaan wax cusub. Waxaa jiri doona koritaan sii socda macaamiisha Shiinaha oo ay ku jiraan khamriyo cusub (ie, Silver Heights Vineyard/Ningxia Hui Autonomous Region; Grace Vineyard/Shanxi Provence; Chateau Changyu AFIP Global/Miyun District, Beijing), iyo isticmaalka oo kordhay.
Isbedelka cimilada iyo qaadashada farsamada ee beeralayda, kuwa khamriga sameeya iyo tafaariiqlayaashu waxay saamayn ku yeelan doonaan habka aan wax u iibsano oo u cabno khamriga. Isbeddelka cimiladu wuxuu abuurayaa gobollo khamri cusub ah oo ku yaal dhul -beereedka markii loo tixgeliyey inaysan ku habboonayn samaynta khamriga. Iswiidhan, Noorweey iyo Nederland waxay bilaabayaan inay horumariyaan khamri heer sare ah sababtoo ah isbeddellada kululaanaya.
Marka laga eego dhinaca farsamada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo robotyadu waxay kordhin doonaan joogitaankooda beerta canabka ah. Tiknoolajiyadda cusubi waxay hagaajinaysaa geedi -socodka sii kordhaya iyada oo ay jiraan dareemayaal dhulka ku jira oo u horseeda horumar xagga maareynta ciidda oo ka caawiya beeraleyda canabka inay go'aamiyaan waqtiga ugu wanaagsan ee canabka biyaha. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa baaraya calaamadaha cudurka iyo abaaraha iyo robots-ka, gacmo u eg maqas ayaa beerta canabka ah u rogaya geedo canab ah.
In badan oo ka mid ah kuwa khamriga sameeya ayaa bilaabaya habab wax-beeris oo waara iyadoo qaar isticmaalaya tamarta qorraxda ee khamriga iyo kuwo kale oo la jaan qaadaya silsiladaha saadka saadinta ee raadinta xalal badan oo sii waara oo sii yarayn doona raadadka kaarboonka.
Marka khamri cabuhu noqdo mid caalami ah, ma daneeyaan ku dhawaaqista ama halsano ama sifooyin kale oo kala saara khamriga. Waxay raadinayaan khamri si sahlan loo tegi karo oo dhadhan fiican leh. Xaalado badan, sumadaha khamrigu waxay la mid noqonayaan magacyada dukaamada waawayn taasina waxay ka dhigan tahay in sumadaha khamrigu noqon doonaan kuwo xiiso badan, hal -abuur leh oo muhiim ah.
Si wax looga qabto dhibaatada been abuurka khamriga, tiknoolojigu wuxuu abuurayaa nidaam xaqiijin iyo kalsooni ku saleysan blockchain. Teknolojiyadda xannibaadda ayaa ah hoggaamiye baahsan, baahsan oo diiwaangelisa aasaaska hantida dhijitaalka ah oo joogto ah oo aan la iloobi karin, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon sidii loo xaqiijin lahaa dhalo khaas ah oo khaas ah oo khamri ah (ie, Vai Wine Vault).
“Ama khamri badan sii ama iga tag.” - Rumi